Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Nipoaka ny volkano japoney izay nipoitra avy eo ny lavenona kilaometatra teny amin'ny lanitra
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nipoaka ny volkano japoney izay nipoitra avy eo ny lavenona kilaometatra teny amin'ny lanitra.
Tanànan'ny volkano maherin'ny 100 i Japon, ary avo ny asan-dranomasina any amin'ny faritra. Ny alakamisy lasa teo dia faritra atsimo iray kilaometatra no napetraka manodidina ny Mount Aso taorian'ny fipoahana kely.
Ny Mount Aso - ilay volkano mavitrika indrindra any Japon - dia nipoaka ny alarobia tokony ho tamin'ny 11 ora maraina.
Mampitandrina ny olona ny tompon'andraikitra Japoney mba hiala amin'ny fandrahonana amin'ny fikorianan'ny lava sy ny fianjeran'ny vato.
Nampitandrina nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny solontenan'ny JMA fa mety misy gazy poizina mamoaka avy amin'ilay volkano.
Mampitandrina ny olona ny tompon'andraikitra japoney mba hiala amin'ny Tendrombohitra Aso, any amin'ny nosy atsimon'i Kyushu, satria mipoaka ny volkano mavitrika be indrindra any Japana, mamoaka etona mafana sy lavenona kilometatra vitsivitsy hatrany amin'ny lanitra.
Nilaza ny polisy avy ao an-toerana fa tsy mbola misy ny tatitra momba ny maty na olona very. Nilaza izy ireo fa mpandeha an-tongotra 16 izay teo amoron-tendrombohitra talohan'io andro io no tafaverina soa aman-tsara.
Araka ny Agency Meteorological Japoney, Mount Aso, toerana fizahan-tany any amin'ny nosy atsimon'ny firenena Kyushu, dia namoaka setroka lavenona 3.5km (2.2 miles) ny haavon'ny alarobia rehefa nipoaka tokony ho tamin'ny 11:43 maraina (02:43 GMT).
Ny masoivoho mpamantatra ny toetrandro dia nametraka ny ambaratonga fampandrenesana ho an'ireo manodidina ny volkano 1,592 metatra (5,222ft) ho telo amin'ny dimy amin'ny ambaratonga mampidi-doza. Noho ny loza ateraky ny vatobe hianjera sy ny fikorianan'ny pyroclastic ao anatin'ny 1km (0.6 miles) avy amin'ny lava vava Nakadake dia nilazana ny olona tsy hanatona ilay faritra.
"Ny ain'ny zanak'olombelona no laharam-pahamehantsika, ary izahay dia miara-miasa amin'ny Tafika miaro tena, polisy, ary mpamono afo mba hiatrehana ny raharaha amin'ny fomba mahomby", hoy ny sekretera kabinetra Hirokazu Matsuno.
Ny tanàna akaiky indrindra an'i Mt Aso dia Aso, izay misy mponina manodidina ny 26,500 XNUMX.
Nisy fipoahana kely ny Mount Aso tamin'ny taona 2019, raha ny loza lehibe indrindra tany Volkano Japon nandritra ny 90 taona no namono olona 63 tao amin'ny Mount Ontake tamin'ny volana septambra 2014.
Japana fonenan'ny volkano 100 mahery, ary avo ny asan-dahalo any amin'io faritra io. Ny alakamisy lasa teo dia faritra atsimo iray kilaometatra no napetraka manodidina ny Mount Aso taorian'ny fipoahana kely.
Ankoatry ny fipoahan'ny volkano, dia fahita koa ny horohoron-tany Japana, iray amin'ireo faritra miasa mafy indrindra eto ambonin'ny tany. Japoney dia manodidina ny 20 isan-jaton'ny horohoron-tany manerantany 6 na mihoatra aza.